जनताकै करबाट पालिएर जनतालाई नै ‘घिनौला सुँड’ भन्ने टिप्पणी बढ़ी नै ‘हार्स’ भयो – Life Nepali
जनताकै करबाट पालिएर जनतालाई नै ‘घिनौला सुँड’ भन्ने टिप्पणी बढ़ी नै ‘हार्स’ भयो
स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई लिएर आमजनताले गरेको टिप्पणीलाई पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘स्वार्थी राजनीतिका घिनौला सुँड यत्रतत्र घुसार्ने कोशिस भइरहेको र यसको जनस्तरबाट भण्डाफोर हुने’ भनेर जबाफ दिनुभएछ । विश्वभर सरकारको आलोचना हुन्छ तर जिम्मेदार अधिकारीले यस्तो जबाफ फर्काएको बिरलै सुन्न पाइन्छ । बरु तिनले विनम्रतापूर्वक माफी माग्छन् र आलोचनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको विश्वास दिलाउँछन् ।
जनताकै करबाट पालिएर जनतालाई नै ‘घिनौला सुँड’ भन्ने टिप्पणी बढ़ी नै ‘हार्स’ भयो । यो पुस्ताले त आलोचनाबाट सिक्ने हो । अस्ट्रेलिया आगलागीसँग जुध्दै थियो । उहाँको अस्ट्रेलिया कार्यक्रम विवादित भयो । सफाइ त ठीक थियो, तर त्यसमा आलोचना गर्नेहरू उहाँले भनेजस्तो ‘नियत नै खराब भएका अराष्ट्रिय तत्त्व’ थिएनन् । एअरपोर्टको शौचालयबारे धेरैले तस्बीर सहित नै टिप्पणी गर्दै आएका छन् । एउटा पर्यटकको टिप्पणी आयो । ‘ट्वाइलेट फोहोर नभएर के फोहोर हुन्छ त ? अलिअलि फोहोर त भइहाल्छ नि !’
यो उहाँको जबाफ थियो । अझ केही वर्षपहिले विदेशीका ट्वाइलेट पनि यस्तै त हुन्थे भन्नु त कत्ति पनि जिम्मेबार जबाफ थिएन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपत्काल घोषणा गरिसक्दा पनि तपाईंले चीनकै मिडियामा नेपाललाई कोरोनामुक्त देशका रूपमा प्रचार गर्ने अनौठो आइडिया प्रस्तुत गर्नुभो । यसले त चीनकै घाउमा नुनचुक दल्नेमात्रै होइन, हाम्रै स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि गम्भीर चुनौती दिन सक्थ्यो । स्वभावतः धेरैले विरोध गरे । तर तपाईंले यस्तै नमिठो जबाफ फर्काउनुभयो ।
Previous जय श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरी , आजको राशिफल पढ्नुहोस् !
Next क्लिनिक र निजी अस्पतालले बि’रामी जाँच्नै छाडे”